Spotify Inovandudza Mashandiro | TeraNews.net
Spotify software inovandudza mashandiro
Munyori Kravetz Pavel Yakabudiswa pa 07.12.2020
Iyo inonakidza skrini yeiyo Beta vhezheni yeSpotify application yakarova paInternet. Iko kune mukana wekuti chirongwa cheSpotify chiri kuvandudza mashandiro. Sevhisi yekutsvaga mimhanzi mumaraibhurari emunhu inozoonekwa muzvirongwa kana pasina kubatana kune dhatabhesi rekushandisa.
Chii chinonzi Spotify uye Nei Uchifanira Icho
Spotify ibasa rinokutendera kuti uteerere zviri pamutemo mumhanzi online kubva paInternet. Chinhu chikuru cheichi chirongwa ndeyekushanda kwayo algorithms. Zvakaringana kuterera kune dzinoverengeka nziyo dzebasa kuti dzigadzirise otomatiki kuravira kwemumuteereri. Pakupera kwekutamba kwekutamba, chirongwa chaicho chinowana mimhanzi mitsva uye chinopa kuiteerera. Zvinoenderana neongororo dzevashandisi, 99% yeapplication "inofungidzira" kufarira kwemuridzi.
Iwe unogona zvakare kukanganwa nezve kurodha pasi kuunganidzwa kwemimhanzi kubva kuhova zvachose. Iyo sevhisi pachayo inounganidza Misanganiswa yeturu dzinozivikanwa kwazvo pazuva, vhiki, mwedzi, gore. Iwe unogona kugadzirisa mimhanzi zvinoenderana nenzira dzakasiyana.
Iwe unofanirwa kubhadhara kuti ushandise Spotify. Kana pane kudaro, nyorera kune imwe nguva yekushandisa. Mutengo webasa wakasiyana nenyika imwe neimwe. Ndiani anonyora mutengo wemutengo haazivikanwe. Sezvo mune dzimwe nyika dzakapfuma mutengo weSpotify wakachipa. Uye munyika dzine urombo (mune imwechete madhora mazwi) iwe unofanirwa kubhadhara ka5-10 zvakapetwa.
Ehe, iwe haufanire kubhadhara chero chinhu uchishandisa Spotify yemahara. Asi iwe unofanirwa kutsungirira kushambadzira, kurambidzwa kurodha mumhanzi kune yako yekuchengetedza. Uye zvakare, akati wandei zvinokanganisa zvine chekuita nemhando uye isina muganho track switch.
Muchokwadi, programmers vanofanirwa kunge vakaunza kuvandudza mashandiro kwenguva yakareba. Mushure mezvose, chirongwa ichi chinobhadharwa uye sevhisi inofanirwa kunge iri yeyero yakakodzera. Iyo Beta vhezheni yakawedzera kugona kuteerera kumimhanzi isingaenderane. Kuti uite izvi, scanner ichaonekwa muchirongwa, icho chinotsvaga maturu mune yekuchengetera kwe smartphone mune ese mabhuku. Zvichida, kuita uku kwakafanana neYouTube "isanganiswa yekusanganisa" sevhisi.
Kunyangwe iko kunyorera kuchikumbira mari, zvinorerutsa hupenyu hwevashandisi. Zvinonzwisisika kune avo vanofarira zvigadzirwa zvitsva, pane "kukwiza" maturu ekare kumaburi.
Nzira nyowani yekuita mari pamatare anopokana neApple
Honor Pad 7 ndiyo yekutanga piritsi reyakazvimirira Chinese brand